laacibfm.com » Qofkii Ugu Da’da Waynaa Aduunka Oo Si Layaableh Uga Soo Bogsaday Caabuqa Aduunka Ka Yaabiyay Ee Coronavirus.
Aduunku waxa uu ku jiraa xaalad jaho wareer ah oo ay wax walba kala xidhmeen, wuxuuna wadan kastaaba dhexdiisa kala dagaalamayaa qaabkii uu iskaga xakamayn lahaa cudurka mucjisada noqday ee Coronavirus oo wax walba joojiyay.
Dalka Talyaanigu waxa uu ka mid yahay wadamada uu faraha baas ku hayo fayraskani laakiin waxaa laga diwaan galiyay arin qariib ah oo aan hore aduunka kale uga soo dhicin.
Cudurka coronavirus waxa uu halis wayn ku yahay dhamaan dadka waa wayn gaar ahaan kuwa xaalado caafimaad oo hore sii qabay balse mid ka mid ah dumarkii da’da waynaa ee dalka Italy ayaa si mucjiso leh uga soo bogsatay cudurkan iyada oo 104 sano jir ah.
Ada Zanusso waa islaanta sida layaabka leh uga soo bogsatay caabuqa coronavirus iyada oo xataa dadkii aadka uga da’da yaraa ee uu ku dhacay ay xili horeba la god galeen, balse wiilkeeda ayaa si qiiro leh uga sheekeeyay sidii ay cudurkan uga soo bogsatay.
Shalay ilaa hadda waxaa dalka Spain loo fadhiyaa tacsiada tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola hooyadii waxayna ka mid ahayd kumanyaal reer Spain ah oo uu galaaftay coronavirus laakiin Ada Zanusso ayaa iyada oo 104 sano jir ah si layaableh u soo bogsatay iyada oo aan xataa wax dareen ah lumin.
Laakiin waxaa warbaahinta si wayn u soo jiidatay dhacdada layaabka leh ee Ada Zanusso oo 104 sano jir ahi ay kaga soo bogsatay cudurka coronvirus oo la ogyahay sida uu dilaa ugu yahay dadka ay da’doodu wayn tahay.
Inagu ka muslim ahaan waxaynu si buuxda u aaminsanahay in naftu ayna jil-jilacy u bixin isla markaana aan halis loo geeriyoon balse ay waqti leedahay oo aanu qofku dhaafayn xiligii ajashiisu ahayd, balse marar badan dhacdooyinka qaar ayaa dadka aan muslimka ahayn u muujiya waxa aynu aaminsanahay waana arinta Ada Zanusso oo kale.
Ada Zanusso waxay ku noolayd goob dadka waa wayn lagu xaneeneeyo halkaas oo uu soo galay cudurka coronavirus waxaana iyada ka hor laga helay dad kale waxayna taasi walwal badan ku abuurtay dhakhaatiirta cudurkan la tacaalayay.
Ayeeyada reer Talyaani ee Ada Zanusso ayaa xanuunka COVID 19 dareentay March 17 kadib markii ay xanuunsatay waxayna bilawday in ay xumad yeelato isla markaana waxaa u bilawday matag iyada oo ka mid noqotay dadka uu waxyeeleeyay Covid 19.
Giampiero waa wiil ay dhashay Ada Zanusso wuxuuna xaaladan uga warmay The Sun isaga oo yidhi:”Waxaan ka shakyay inuu Coronvirus ahaa, sababtoo ah tirada kiisaska guriga lagu xanaanaynayay laga helay. Murugo ayay lahayd waxaana halkaas ka jiray dad ku dhintay si deg deg ah”.
Giampiero oo ka hadlaya in ay hooyadii noqotay qofkii ugu da’da waynaa ee aduunka oo dhan ka soo kabsatay covid 19 ayaa yidhi: “Laakiin iyadu hadda si fiican ayay u soo kabsatay, waxay dhakhaatiirtu filayaan in ay tahay shaqsigii ugu da’da waynaa ee aduunka oo dhan ee soo kabsatay”.
Dhakhtarkii daawaynta u sameeyay Ayeeyada 104 sano jirka ah ee Ada Zanusso oo magiciisa la yidhaa Carla Furno Marchese ayaa yidhi: “Iyadu way kacday, sariirtana ma jiifto, waxay ku socon kartaa wiiljeerkeeda. Iyadu may lumin xuusteeda iyo maskax fiicnideeda”.
Carla Furno Marchese ayaa farxad ka muujiyay kiiskan layaabka leh ee uu daawayntiisa sameeyay wuxuuna yidhi: “Soo kabsashadeedu waxay anaga noo tahay farxad wayn iyo caalada rajo fiican ee dhamaan dadka waqtigan adag dhibtoonaya”.